Sheeko Layaab Leh: Nin Xaaskiisa furay kadibna ku shaaciyay gaarigiisa inuu furay, si loo ogaado | Aayaha
Home»LAYAABKA»Sheeko Layaab Leh: Nin Xaaskiisa furay kadibna ku shaaciyay gaarigiisa inuu furay, si loo ogaado
Aayaha editor Send an email February 5, 2019
Nin u dhashay dalka Kenya ayaa sameeyay arrin aad loola yaabo kadib markii uu xaaskiisa furay.
Ninkaan ayaa aad loola yaabay kadib markii uu gaarigiisa ku qortay inuu xaskiisa furay, iyadoo arrintaas ay dhalisay dood badan oo bulshada dhexdeeda ah oo ku aadan sababta uu ugu dabaal degay furriinka xaaskiisa isla markaana uu gaarigiisa ugu qortay.
Marka laga soo tago aragtida bulshada, furiinka ayaa sababi kara dabaal deg haddii haweeneyda uu ninka furay ay ahayd mid dhibaato ku heysay, waxana ninkaan uu rabay in qof kasta uu ogaado inuu ugu dambeyn ka xuroobay xabsi uu ku jiray.
Waxaa suurtagal ah inaad aragto dad gaadiidkooda ku qoranaya inay guursadeen si ay ugu dabaal degaan guurkooda, sidaa darted yarkaan wuxuu go’aansaday inuu gaarigiisa ku qorto calaamad muujineysa inuu xaaskiisii furay isla markaana uu doob yahay taasoo baaq ku socda hablaha.
Hoos ka daawo sawirka: